Wararka - Sida loo doorto qalab wareeg ah oo la isku halayn karo, waara
Sida loo doorto valle wareeg ah oo la isku halayn karo, waara
Doorashada waalka wareega ee loo isticmaalo in ay ahaato arrin la mid ah awoodda quudinta waalka, oo ku salaysan cufnaanta badan ee alaabtaada, habka loo baahan yahay ama awoodda habka gudbinta oofwareenka.
Xulashada valve qufulka hawada ee Rotary waxay ku lug leedahay isku-darka tijaabada agabka, injineernimada naqshadaynta kombuyuutarku kaalmeeyey, agab cayriin oo tayadoodu sarreyso, shubista horumarsan iyo habraacyada been abuurka shahaadaysan, mashiin sax ah, iyo xidhidhyo tayo sare leh iyo shabbado usheeda dhexe. Sida maqaalkani sharaxayo, natiijadu waa waalka rotary ee loo farsameeyay si uu u dhigma codsigaaga oo u bixiyo adeeg la isku halayn karo, waara.
Intee in le'eg ayuu waalka rotary shaqayn karaa? Warshadaha kiimikada, cuntada, iyo daawooyinka, qalabka waxaa loo arkaa in la isku halayn karo haddii uu shaqeeyo iyada oo aan la ilaalin, iyada oo aan la joogin, 100 boqolkiiba wakhtiga, 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii. Waalka wareega ee la isku halayn karo, waara waa inuu si joogto ah ugu shaqeeyaa nidaamkaaga iyada oo aan la hagaajin ama adeeg aan ahayn marka si ula kac ah loo xidho dayactir ka hortag ah. Iyo dayactirka ka-hortagga wanaagsan, waxaad filan kartaa inuu waalkaagu shaqeeyo 30 ilaa 40 sano.
3 Way Ball Valve, 3-Way weeciye Valve, quudiyaha rotary, hawo xidhid, Xakamaynta Elektarooniga ah, valve rotary,